Soomaaliya, 29 December 2014
Isniin 29 December 2014
9 ku Dhimatay Weerarkii Alshabab ee AMISOM
AMISOM ayaa sheegtay in 5 weerar soo qaaday, 3 ka tirsan ciidanka AMISOM, iyo hal qof oo shicib ah ay ku dhinteen dagaal xaruntooda ka dhacay, iyada oo AMISOM ay sidoo kale sheegtay in 3 ka mid ah xubnihii Alshabab ee weerarka soo qaaday la qabtay
Wareysiyo: Sharmaarke & Cabdiweli
Ra'iisul-wasaaraha cusub Cumar Cabdirashiid iyo RW hore Cabdiwali Sheekh ayaa bixiyay wareysiyo gaar ah oo ay si gooni gooni ah u siiyeen VOA.
Sharmaarke: Wax Khilaaf ah ma Dhici doono
RW cusub ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo maanta si rasmi ah ula wareegay xafiiska ayaa sheegay inuu rajaynayo inaan wax khilaaf ah dhexmari doonin isaga iyo madaxweynaha inta ka dhiman wakhtiga dowladda.
Waraysi Gaar ah: RW hore Cabdiweli Sheekh
RW hore ee xilka baneenay, Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa Waraysi gaar ah oo uu VOA siiyey madaxweynmaha iyo RW cusub ugu baaqay inay khilaaf iska ilaaliyaan. Wareysigan wuxuu kaloo kaga hadlau khilaafkii isaga iyo madaxweynaha.
Koox loo malaynayo inay ka tirsan yihiin ururka Alshabab ayaa weerar hubaysan ku qaadey Saldhiga AMISOM ee Xalane ee magaalada Muqdisho. Weerarkan ayaa la sheegayaa inay dableydu ay xerada kasoo galeen dhinaca dambe